OTU ESI EMELITE BIOS NA LAPTỌỌPỤ ACER - BIOS - 2019
Anyị na-emelite BIOS na laptọọpụ Acer
Onye ọ bụla na-eji ekwentị mkpanaaka, kwa oge ọ dị mkpa ijikọ ya na kọmputa. Ụdị ụfọdụ na-ahapụ gị ka ilee ozi nke ama na-enweghị wụnye ngwa pụrụ iche. Ma ọtụtụ ndị, mana, chọrọ otu ngwanrọ. Ugbu a, anyị ga-ekwurịta banyere ụdị ekwentị mkpanaaka "Samsung".
Samsung Kies - usoro iji jikọọ ekwentị na kọmputa. Ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta nwere ọtụtụ nsụgharị nke usoro ihe omume ahụ, a na-ahọrọ ha dabere na sistemụ arụmọrụ na ụdị ekwentị. Tụlee ihe ndị dị mkpa nke usoro ihe omume ahụ
N'iji ụdị njikọ a, ọrụ niile a na-akwado ga-adị. Kwesịrị ekwesị maka ụdị Samsung ọ bụla. Iji njikọ USB, ị nwere ike ịlele ọdịnaya nke ekwentị na kaadị SD, mekọrịta listi kọntaktị na data, nyefee ozi.
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị njikọ a, biko mara na ọ bụghị maka ụdị Samsung niile. Na mgbakwunye, ọrụ melite na ọrụ ntanetị agaghị adị. N'oge njikọ, arụ ọrụ abụọ ahụ ga-esonye na nso otu netwọk ikuku na ọtụtụ nhazi ga-eme ka PC. N'adịghị onye ọ bụla ga-anagide nke a, ya mere, ndị ọrụ na-enweghị uche ejiriwo ochie, nke a pụrụ ịdabere na ha ejikọta ya na cable.
Ihe omume ahụ na-akwado mmekọrịta nke kọntaktsị, dịka Google, na ị ga-achọ ịbanye na akaụntụ gị. Ị nwere ike ịmekọrịta ozi ndị ọzọ, na ike ịmepụta ihe dị mkpa ka ejikọta na ihe ịhapụ dị ka. Na ụdị ụfọdụ, enwere ike imekọrịta naanị site na ọrụ Outlook.
Ka ịchekwa ozi nkeonwe site na ekwentị, ịkwesịrị iji ọrụ ndabere. Iṅomi na-ewere ọnọdụ site na ebe nchekwa ekwentị, yabụ, ozi ahụ site na kaadị agaghị etinye na ya. Na kọntaktị echekwa echekwara, foto, egwu, ntọala na ngwa. Onye ọrụ ahụ na-ekpebi onwe ya.
Site na faịlụ ahụ a natara, ọ dị mfe iji weghachite data ahụ, ma ihe niile sitere na ebe nchekwa ekwentị ga-eji dochie ya.
Mgbake ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ekwentị gị, ị nwere ike ịnwa iji dozie ha na ọkachamara ahụ wuru. Otú ọ dị, ọ dịghị nkwa na nsogbu ahụ ga-apụ n'anya.
Na njirimara a, ị nwere ike ịlele maka mmelite ma jiri ya rụọ ọrụ site na USB. Imelite ahụ n'otu oge na-abịa na ekwentị ma ọ bụrụ na njikọ Ịntanetị dị.
Ọbụna na Samsung Kies na-enye ike ịgbanwe asụsụ interface. A na-emelite asụsụ a họọrọ mgbe emeghachịri usoro ahụ.
A na-elele ndabere site na ngalaba pụrụ iche na ihichapụ enweghị isi.
Ọ bụrụ na achọrọ, maka Samsung Kies, ị nwere ike ịhazi ọnọdụ ikikere.
Ngwa ngwa ịzụ ahịa
Site na mmemme a ị nwere ike ịchọ, ibudata ma zụta ngwa dị iche iche. Ihe niile ga-adị mgbe ị abanye na akaụntụ Samsung gị, ma ọ bụrụ na ụdị ekwentị a kwadoro atụmatụ a.
N'ịkọ elu, enwere m ike ịsị na usoro Samsung Kies bụ ihe na-adọrọ adọrọ na njedebe, mana ọsọ ya na kọmputa ndị na-adịghị ike na-enye nsogbu.
O nwere ọtụtụ ọrụ;
Ikike nke ịgbanwe asụsụ ogbi;
Ọ nwere ọtụtụ nhọrọ njikọ.
Ọ nwere nnukwu usoro chọrọ;
Na-enyefe ma na-enye njehie.
Gịnị mere Samsung Kies anaghị ahụ ekwentị ahụ? Olee otú ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka Samsung Galaxy S3 Otu esi abanye BIOS na laptọọpụ Samsung MOBILEDIT!
Samsung Kies bụ onye na-ahụ maka ngwanrọ iji jikọọ Samsung smartphones na kọmputa maka nzube nkekọrịta mmekọrịta data na nkekọrịta faịlụ.
Onye Mmepụta: Samsung Electronics Co., Ltd.